macruufka 9 iPhone vs. Samsung Galaxy qod6 Edge
Ka hor inta aynaan bilaabin barbardhigo naga dhexeeya 9 macruufka ah iPhone iyo Samsung Galaxy qod6 Edge, ogolaanaysaa si deg deg ah eegno qaar ka mid ah qaababka ugu xiiso leh oo cusub in macruufka 9 yimaado leh. Kuwani waa qaababka cusub ee Kacaanka oo marka la barbar dhigo waxa ay ilaa iyo haatan ku sugan qoraaladii hore ka Apple waxaan lahaa.
Muuqaalada yaab leh in macruufka 9
Xogta Transit ee Apple Maps - Iyada oo macruufka 9, Apple ayaa soo bandhigay update ka badan loo baahan yahay in Apple Maps oo ah qaab Transit. Apple Maps hadda aad tusi karto fursadaha routing oo ay ku jiraan macluumaad ku saabsan safarka baska, tareenka dhulka hoostiisa, tareenada iyo cagaha, sida in kiiska la Google Maps.
Taageero la dheereeyey u Apple Pay - Ilaa hadda Codso Pay taageeri karaa oo keliya marka haystaa sacab muggiis oo kaararka bangiga US si kastaba ha ahaatee la macruufka 9, taas ballaarinaya galay bixiyayaasha kale oo ay ku jiraan Baro. Apple ayaa sidoo kale kordhiyay taageerada Apple Pay in dadka isticmaala ay suuqa UK, taas oo sidoo kale isbedel weyn oo soo dhaweyn leh.
New Barta bartamaha Search - The Search Spotlight la macruufka 9 hadda qoreysa Siri la kordhiyo la kala duwan oo soo bandhigay warbixin ku saabsan xaq u screen weyn ee raadinta sida xiriirada muhiimka ah, app talooyin, waqti iyo xog gaar ah oo goobta iwm Sidoo kale, hadda ka bandhigay natiijooyinka raadinta videos sidoo in xataa lagu ciyaari karo isagoo aan ka tago screen raadinta.
Low Power Mode - maamulka Battery ayaa qaaday boodda oo cusub hordhaca ah ee ka Low Power Mode ee macruufka 9 kuwaas oo markii firfircoonaan ku siin karaa hal saac oo buuxa dheeraad ah isticmaalka marka la barbar dhigo qaybaha hore ee macruufka in ka maqan Doorashadan in la bilaabo.
Hagaajinta Multi duruufaha Murayaad - macruufka 9 faanaa ah qaabka wanaagsanaaday inta badan ay suuqa kala duruufaha kala duwan. Sida marka la barbardhigo nuquladii hore, macruufka 9 leeyahay qaabka la Falanqeynta app muuqashada ee foomka of xidhmooyin kaarka taasoo u fududaynaysa in ay ku dhajisan iyada oo barnaamijyadooda kala duwan furan iyo ka tago kuwa ku jira aan loo baahnayn mar kasta oo waqti.
The Isbarbar - Edge macruufka 9 iPhone vs. Samsung Galaxy qod6
Boot ilaa Speed ​​- In aannu tijaabada xawaaraha boot kor, waxaan ka helay Galaxy qod6 Samsung ee Edge in ay kaliya xoogaa ka dhaqso badan 9 macruufka ah iPhone. Waxay ahayd ilaa iyo ordaya ah shir sanadeedkii 3-4 ilbidhiqsi ka hor inta iPhone oo waa arrin degdeg ah.
Power off screen - Waa in aad iska qaban hoos Power badhanka dheer ee macruufka 9 iPhone marka la barbar dhigo Galaxy qod6 Samsung ee Edge daaha Power Off ay u muuqan. Iyagoo keliya ma aha in, 9 macruufka ah iPhone u muuqataa in ay sameeyeen isbedel lahayn in shaashada sida ay weli kaliya ayaa bixiya fursad aad ku damiya telefoonka halka on Samsung, waxaad ka heli liiska fursado ay ka mid yihiin hab Flight, Guuleysatey, hab Emergency badan oo kor ku xusan Power off ikhtiyaarka, taas oo aanu helay in ay ku haboon.
Engine Mowduuca hidi - The Samsung Galaxy qod6 Edge leeyahay faa'iidooyinka kale oo ka badan 9 macruufka ah iPhone degaanka ee mawduucyada sida ku timaadda gaar ah ay engine hidi-theme kuu oggolaanaysa in aad kala dooratid mawduucyada kala duwan oo kala duwan, wax weli ka maqan yahay ee macruufka version ugu dambeeyey sidoo kale. Waxa kaliya ee aad samayn karto ku saabsan arrimo 9 iPhone waa beddelo wallpaper ah, laakiin wax kasta ah u bedelo ay UI ma aad samayn kartid.
Web Browsing - Waxa la yaab leh, in kastoo iPhone la socda ee muhiimka ah processor ah measly dual marka la barbar dhigo xudunta octa on Samsung Galaxy qod6 Edge, iyadoo arrimo ay 9 nidaamka qalliinka, iPhone wuxuu awood u shuban inta badan website-ka ka badan si deg deg ah ka badan ee Samsung ayaa waxa qasdigiisu qalab.
Battery Power - Apple ayaa qabtay shaqo cajiib ah oo leh awooda batariga cusub iyo Maarraynta macruufka 9, waxaa jira koror ilaa 25% in ay nolosha batteriga. Dhinaca kale, Samsung Galaxy qod6 Edge bixisaa muujinta farxada xukun wireless oo ah soo jiidashada weyn u iibsada iyo sidoo.
Sidee si ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya macruufka 9 iPhone iyo Samsung Galaxy qod6 Edge
Hadda, kuwa idinka mid ah ee qorsheynaya inay u beddelaan ka macruufka 9 iPhone si cusub Samsung Galaxy qod6 Edge ama bilcaksii, walaac ugu muhiimsan ee ay ahaan lahaayeen kuwo kala iibsiga xogta u dhexeeya laba qalabka . Qofna ma doonayo inuu badiyo wax ka mid ah xogta muhiimka ah sida xiriirada, sawiro, fariimaha, xogta codsiga iwm hagaag, waxaan heysanaa news weyn loogu talagalay adiga wax aynu hadda helay qalab ugu fiican si ay u sameeyaan guurka neecaw wanaagsan idiin, qaado a hoos ku dooneyso in ay wax badan ka ogaatid.
MobileTrans Ka Wondershare waa wax soo saarka la yaab ka dhigaya super u fududahay in aad wareejin photos, xiriirada, fariimaha qoraalka ah, video, jadwalka taariikhda, music, barnaamijyadooda iyo xitaa Guda wac mid ka mid phone in kale, iyadoo la kaashanayo kaliya 1 click. Waa sidan sidii aad u isticmaali karto si aad u kala bedesho macruufka 9 iPhone iyo Samsung Galaxy qod6 Edge.
Talaabada 1: Download iyo rakibi Wondershare MobileTrans on your computer - Windows & Mac . Marka la rakibo ay ka badan tahay, waxay wadaan barnaamij iyo in bogga codsiga ah, dooro Phone in hab Transfer Phone ka dibna bilow.
Talaabada 2: Isku labada macruufka aad 9 iPhone iyo Samsung Galaxy qod6 Edge in computer ee codsiga in la ogaado oo tusi ay hindiseen.
Tallaabada 3: Marka ay laba telefoonada la ogaan, software si toos ah ku tusi doonaa liiska content laga heli karaa in aad wareejin karaan, dooro kuwa aad u baahan tahay oo ku dhacay Start Copy.
Taasi waa! Iyada oo talaabooyin fudud oo si sahlan ku xusan, hadda waxaad si fudud isugu bedeli kartid macruufka aad ugu dambeeyey iyo qalabka Samsung.
Time for a poll deg deg ah hadda!
Markuu arkay barbardhigo u dhexeeya qaababka on Samsung Galaxy qod6 Edge iyo macruufka 9 iPhone, kuwaas oo mid ka mid ah qalabka, kuwaas oo lahaa aad jecel yahay hadda? Noo soo sheeg waxa aad jawaab u noqon lahaa mid ka mid ah kuwan soo socda laba doorasho:
Wali waxaan jeclahay inaan iPhone socda macruufka 9
Waxaan jeclaan lahaa in ay a Edge Samsung Galaxy qod6
> Resource > iPhone > iOS9 iPhone vs. Edge Samsung Galaxy qod6